laxmi bank(laxmi bank)
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले निष्कासन गरेको रु. २ अर्ब मूल्यबराबरको ‘८.५% लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर, २०८८’ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ। आज एक कार्यक्रमबीच लक्ष्मी बैंक र नेप्सेबीच उक्त ऋणपत्र सूचीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौतापत्रमा नेप्सेका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरन्जन फुयाल र लक्ष्मी बैंकका...
सुनसरीको चिमडीमा लक्ष्मी बैंकको १३५ औँ शाखा सञ्चालन
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले सुनसरी जिल्लाको बर्जु गाउँपालिका वडा न. ६ को चिमडीमा आफ्नो १३५ औँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो शाखामार्फत बैंकले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरुमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यस नयाँ शाखाको सुरुआतसँगै लक्ष्मी बैंकको...
लक्ष्मी बैंकद्वारा काठमाण्डौको क्षेत्रपाटीमा १३३ औँ शाखा सञ्चालन
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले काठमाण्डौ महानगरपालिकाको वडा न. १७ क्षेत्रपाटीमा आफ्नो १३३ औँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएकोे छ। यो शाखामार्फत बैंकले ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवाका साथै साना तथा लघुव्यवसायीमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो नयाँ शाखाका साथ लक्ष्मी बैंकको सञ्जाल ४८...
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको ऋणपत्र बाँडफाँड गरिएको छ । बैंकद्वारा गत असार २८ गतेदेखि साउन ५ गतेसम्म जारी गरिएको २ अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर २०८८’ नामक ऋणपत्र साउन ११ गते बाँडफाँड गरिएको हो । रितपूर्वक ऋणपत्रका लागि प्राप्त आवेदनहरु प्रशोधन गर्दा सर्वसाधारणका लागि माग बमोजिम र व्यक्तिगत तबर मार्फतका...
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज(साउन ५ गते) अन्तिम दिन रहेको छ । बैंकले गत असार २८ गतेदेखि निष्कासन गरेको २ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको हो । बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल २० लाख कित्ता भएको १० वर्षे अवधिको ‘ १० वर्ष,८.५ प्रतिशत लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर ’ नामक ऋणपत्र...
लक्ष्मी बैंकद्वारा सिराहाको मिर्चैयामा १३२ औँ शाखा सञ्चालन
काठमाण्डौ। लक्ष्मी बैंकले सिराहा जिल्लाको मिर्चैया नगरपालिका वडा न. ६ स्थित कटारी चोकमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा १३२औँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ शाखामार्फत बैकंले ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरु ााझ...
लक्ष्मी बैंकको ऋणपत्र निष्कासन आजदेखि
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले आज(असार २८ गते)देखि २ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल २० लाख कित्ता भएको १० वर्षे अवधिको ‘ १० वर्ष,८.५ प्रतिशत लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर ’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो । कुल निष्कासनमध्ये १२ लाख इकाइ व्यक्तिगत तवरबाट र बाकीँ ८ लाख इकाइ भने आम...
बुढानिलकण्ठको गणेशचोकमा लक्ष्मी बैंकको १३० औँ शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले बुढानिलकण्ठको वडा न ६ स्थित गणेश चोकमा आफ्नो १३०औँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएकोे छ। यो नयाँ शाखामार्फत बैंकले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। यो नयाँ शाखाको साथ लक्ष्मी बैंकको सञ्जाल...
लक्ष्मी बैंकले असार २८ गतदेखि रु.२ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले आगामी असार २८ गतेदेखि २ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल २० लाख कित्ता भएको १० वर्षे अवधिको ‘ १० वर्ष,८.५ प्रतिशत लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर ’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । कुल निष्कासनमध्ये १२ लाख इकाइ व्यक्तिगत तवरबाट र बाकीँ ८ लाख इकाइ...
लक्ष्मी बैंकले २ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्न सेबोनबाट पायो अनुमति
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति प्राप्त गरेको छ । बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)बाट असार १५ गते ‘ १० वर्ष,८.५ प्रतिशत लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर ’ नामक ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति पाएको हो । धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएसँगै अब बैंकले प्रति इकाइ १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका २० लाख कित्ताले हुन आउने २ अर्ब...
लक्ष्मी बैंकको युरो कप योजना: ‘मोबाइल मनी–प्रेडिक्ट एन्ड विन!
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले एफ–वान सफटसँग मिली मोबाइल मनी–प्रेडिक्ट एन्ड विन ! ’ योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो योजना युरो कप २०२१ सुरु भएको दिनदेखि अर्थात जुन ११ देखि सुरुआत भई युरो कपको अन्त्यसम्म अर्थात अन्तिम दिन जुलाई ११ सम्म जारी रहनेछ। यस योजनामा ५ जना भाग्यशाली विजेताहरुले ५० एमबीपीएसको १ वर्ष अवधिको इन्टरनेट सब�...
लक्ष्मी बैंकद्वारा एलएक्सबी कनेक्ट प्लाटफर्मको घोषणा, साझेदारीका आह्वान
काठमाडौं। लक्ष्मी बैंकले एपिआइ बैकिङको माध्यमबाट डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउन एलएक्सबी कनेक्ट प्लाटफर्मको घोषणा गरी साझेदारीका लागि आह्वान गरेको छ। बैंकका अनुसार सााझेदारी अन्तर्गत फिन्टेक, स्टार्टअप तथा डेभलपरहरुले आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित बैंकका साझा ग्राहकहरुलाई विविध डिजिटल सेवा दिन सक्नेछन्। एलएक्सबी कनेक्ट ...
मेगा बैंक र लक्ष्मी बैंकको सेयरमूल्य समायोजन
काठमाण्डौ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले दुईवटा बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले मेगा बैंक लिमिटेड र लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेका बोनस सेयरका लागि सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। मेगा बैंकद्वारा गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित १० प्रतिशत बोनस सेयरका लागि सेयरमूल्य समायोजन गर्दै नेप्सेले...
लक्ष्मी बैंकद्वारा लाभांस प्रस्ताव
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको छ। बैंकको हिजो(मंसिर २९ गते)बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो। बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ९ प्रतिशत बोनस सेयर र २.५ प्रतिशत नगद लाभांस गरी कुल ११.५ प्रतिशत लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो। बैंकद्वारा...
लक्ष्मी बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रमण नेपाल नियुक्त
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रमण नेपाल नियुक्त भएका छन्। बैंकको सञ्चालक समितिको आज सम्पन्न बैठकले नेपाललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। नवनियुक्त अध्यक्ष नेपालले आजै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष अनलाइन बाट अध्यक्ष पदको सपथ लिएका छन्। अध्यक्ष नेपालले...